बेबी हेरविचार - बाल छाला | डाउनलोडको लागि निःशुल्क रंगीन पृष्ठहरू
बच्चाको हेरचाह - बच्चा छाला
कसरी बच्चाको छाला विकास हुन्छ
बच्चा र गर्भावस्थाको बारेमा थप पृष्ठहरू
वयस्क छालाको भन्दा बच्चाको छाला धेरै पतला हुन्छ। यो पनि सुरक्षात्मक सींग को तह को कमी छ, जो पर्यावरणीय प्रभावहरु र बीमारी रोगहरु देखि बच्छ। यसको कारण, शिशु छाला धेरै सुन्दर रेश्मीलाई लाग्छ, तर यो धेरै संवेदनशील छ।
किन छालाको संवेदनशील हुन्छ?
यसबाहेक, नवजातिका छालामा, कम कताई ऊतक मा फैटी ऊतक पूरी तरिका विकसित छैन। यसको कारण, शिशुहरू चिसोमा धेरै संवेदनशील छन्।
बच्चाको छाला विशेष हेरविचार चाहिन्छ
वयस्कहरु को छाला मा अन्य भिन्नता पनि छन्। यसैले, बच्चाको पसीना ग्रंथिहरू अझै सम्म शरीरको तापक्रममा तापक्रममा तापक्रममा नियमन गर्न सक्दैनन् र परिणामस्वरूप वाष्पकरण पर्याप्त ठण्ड हुन्छ। तथापि, नवजात पुष्पको छालामा खरगोश ग्राउण्डहरू पहिले नै उपस्थित छन्। यी अझैसम्म पर्याप्त फ्याट उत्पादन गर्न सक्षम छैनन्।
यस कारणको लागि, छालाको छाला पनि धेरै सुकेको छ र यसैले खनिज फिंगीका लागि सतहको सतह बनाउँछ, जो डायपर अन्तर्गत न्यानो र हार्दिक वातावरणमा विकास गर्न सक्छ।
यो जीवाणु संक्रमण को लागि यति तेजी देखि आउन सक्छ। यसका पहिलो संकेतहरू छालाका परिवर्तनहरू र घडीहरू हुन्। यहाँ त आवश्यक छ बच्चाहरु द्वारा उपचार।
यसबाहेक, यो निश्चित हुनुपर्दछ कि बच्चा जीवनको पहिलो वर्षमा सूर्यको बानीको सामना गरिरहेको छैन, किनभने छालामा कुनै पनि मिजिनेन छैन। मेलानिन भूरी छालाको चित्रकला हो। यसले छालाको लागि विशेष सनस्क्रीन बनाउँछ।
छाला सबैभन्दा ठूलो सेन्सर अंग हो। यो भित्र र बाहिर बीचको जडान को प्रतिनिधित्व गर्दछ। नवजात को छाला को माध्यम ले उनको पर्यावरण को पहिलो प्रभाव दिइन्छ। त्यसैले यसले स्पर्श, दुखाइ र तापमानको भिन्नता महसुस गर्न सक्छ।
नवजातको छालाको सतह दोहोरोको रूपमा वयस्कको शरीरको वजनको रूपमा ठूलो हुन्छ। त्यसरी नै ठूलो छ भने सबै नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावहरूको लागि हमला सतह। गर्मीमा, छालाको मासुको चिसो गुमाउँछ र यो यूवी विकिरणले धूमपान गर्न सक्छ। मकैको कमी र अहिलेसम्म पूर्णतया विकसित गरिएको एसिड-सुरक्षात्मक कोट रोगाणुहरू चाँडै एक समस्या हुन सक्छ।
केवल केहि महिना पछि, आत्म-सुरक्षा तंत्रले ढिलो बनाउँछ। सूर्य संरक्षण कारक मिलनको रूपमा बनाइएको छ। स्थिति एसिड मोती संग समान छ। उहाँले बिस्तारै उठाउनुहुन्छ।
जन्म पछि, बच्चाहरु लाई अझै पनि उनको छाला मा "पनीर तेल" भनिन्छ। यो शरीरको आफ्नै छाला संरक्षण क्रीमको प्रकार हो। यो "पनीर चिसो" ले छातीको रक्षा गर्दछ पहिले यो अझै माइनोटिक द्राइमा मृत्यु भएको छ। जन्मको समयमा, यो स्नेहक को रूपमा कार्य गर्दछ र जन्म पछि, यो बच्चा लिन्छ र कूलिंग गर्नुअघि एक सुरक्षात्मक तहको रूपमा कार्य गर्दछ।
पनीरको तेल ह्वाइटलेस ह्वाइलेट र पीठो रंग हो। आंशिक रूपमा उनले जन्म पछि छाला प्रवेश गर्छन्। यो नवजातिका लागि विशेष गरी राम्रो सुरक्षा हो, त्यसैले आज कहिलेकाहीं अब धोईएको छैन, तर धीरजी छालामा माछा मार्छ।
कहिलेकाहीँ यो हुन सक्छ कि जन्मदिनको पहिलो दिनमा नवजात शिशुहरूले सुकेको छाला देखाउँछन्। यो ठूलो आकार समाधान गर्न सक्छ। यद्यपि, यो चिन्ताको कारण होइन। जन्म पछि सूखाको माथिल्लो तहको लागि यो सामान्य छ र त्यसपछि डन्ड्रफमा बहाइन्छ। यो प्रक्रिया सामान्यतया 14 दिन पछि हुन्छ र छाला त्यसपछि गुलाबी र बच्चा नरम हुन्छ।
गर्भवती र गर्भधारण
मानिसको दृष्टिकोण बाट गर्भावस्था
ध्यान बिल्ली मालिक - toxoplasmosis
बेबी र बेबी केयर
बेबी दायाँ डायपरको साथ लपेटो
बच्चाको कोर बट
बेबी हेरविचार उत्पादनहरू
बच्चा स्नान गर्दैछ
बच्चाहरु को बीमारियों लाई जल्दी पहचाना
हनी वा मेपल सिरप द्वारा शिशु बोटुलुम
स्तनपान - हाँ वा होइन?
स्तनपान गर्ने बेला बुबाहरू समावेश गर्नुहोस्
बेबी हेरविचार - रोगहरू पत्ता लगाउन प्रारम्भिक
बेबी हेरविचार - स्नान
बेबी हेरविचार - स्नान, कति पटक
बेबी हेरविचार - डायपर र डायपर
बेबी हेरविचार - हेरविचार उत्पादनहरू